VoltyChannel Stop Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha VoltyChannel Stop Forex Tusiyaha
VoltyChannel Stop Forex Tusiyaha
VoltyChannel Stop Forex Tusiyaha waa nooc ka mid ah tilmaame channel inkastoo ay channel waa discontinuous. Waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo lagu talinayaa in bilowga ah Forex ee. tilmaame ma siin signal arrow sida tilmaamayaasha kale oo badan ha laakiin siinayaa heerka stop hoostiisa ama ka hooseeya oo qiimaha suuqa ayaa la filayaa in uu noqdo.
Haddii si fiican looga faa'iideysan, tilmaame waxay kaa caawin kartaa faa'iidada aad ka dhigi. Laakiin haddii si qaldan ama loo isticmaalo si qaldan, isla tilmaame ka dhigi doonaa waxaad samayn khasaaraha ka dib markii khasaare.
Tilmaamahan waa wanaagsan ee ganacsatada muddada dheer.
Fahamka sida this shaqo tilmaame.
tilmaame waxaa soo bandhigay shaxda ugu weyn. Waxaa abuuraa khadadka in ay leeyihiin dhibic ee asal / bilowgii. Khadadku waa mid guduudan ama buluug ah. The khadadka cas loo sameeyay kor qiimaha suuqa halka khadadka buluug ahaan hoos qiimaha suuqa. Taas macnaheedu waa in khadadka cas had iyo jeer waa kor laambadihii halka khadadka buluug ah had iyo jeer yihiin hoos laambadihii.
tilmaame ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa heerka ay hadda ka mid ah mid ka mid ah khadadka sanduuqa qiimaha show ah in loo maleeyo midabka ah ee line at gacanta. Haddii aadan rabin in aad u aragto heerka suuqa ee hadda ee khadka ahbaa, waa inaad ku labanlaabtaa kartaa guji tilmaanta oo taga si tab gashiga iyo dhigay sanduuqa qiimaha show sida beenta ah. Waxa kale oo aad samayn kartaa width ee sanduuqan at meel ka mid ah ay ku beddelaan qiimaha of the 'sanduuqa aan width' dhimaya aqbasho.
lagugu tuday sawirka.1. The VoltyChannel Stop tilmaame.
Waxa kale oo muhiim ah la tilmaame tani waa qaylodhaan codka. dhawaaqyada heegan by default ayaa lagu wadaa inuu been ah oo u baahan ganacsade si dhigeen sida runta ah marka Ganacsi si aad u hesho digniin ah. Tani qaylodhaan waa mid aad u muhiim ah gaar ahaan bilowga ah Forex ee. Waxay muujiyaan heerka hadda line volty channel. Sidaas darteed haddii aad ku dhigay sanduuqa qiimaha show sida runta ah, ma jirto baahi loo qabo in dhigay heegan dhawaaqa si run ah. Laakiin haddii aad qotomisay sanduuqa qiimaha show si been ah, laga yaabee inaad dejinta heegan ku dhawaaq si run ah. The shaqo laba in la siiyo wax la mid ah taas oo ah heerka khadka.
The khadadka cas oo buluug ah waa in la tixgeliyaa sida taageerada iyo iska caabin ah heerarka.
VoltyChannel Stop tilmaame dhigaya amar iibiyay:
amarada Iibiya waxaa la geeyaa at bilawga dhismaha line cas. khasaare stop The waa in lagu rakibaa heerka khadka cas. Markaas sida khadka cas ku waddaa inay hoos u guurto stop khasaaraha waa sida beddelo. Ma jirto baahi ah in la isticmaalo faa'iidada ka qaadataan tan iyo khasaaro stop la beddelo ilaa uu helo ka hooseysa heerka qiimaha amarka iyo bilaabataa simaha sida faa'iido qaadataan a.
VoltyChannel Stop tilmaame dhigaya amar buy
Iibso amarada waxaa la geeyaa at bilawga formation buluug line. Markaas stop khasaare la dhigayaa heerka ugu of khadka buluuga ah. stop khasaare waa ka dibna sida ugu dhaqaaqay sida heerarka khadka buluug sii wadaan in ay ku kici ilaa stop khasaaraha uu helo heer ka sarreeya qiimaha amarka iyo bilaabataa simaha sida faa'iido qaadataan a.
Fig.2. Ka baddesho iyo xidhitaanka amarada la isticmaalayo Tilmaame VoltyChannel Stop.
VoltyChannel Stop Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
VoltyChannel Stop Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo VoltyChannel Stop Forex Indicator.mq4?
Copy VoltyChannel Stop Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha VoltyChannel Stop Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar VoltyChannel Stop Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousDeMarker GF Forex Tusiyaha
Next articleVar guurista Celceliska V2 Forex Tusiyaha